Posted on November 11, 2009 by Roopess	काठमाण्डु । एउटा दिक्कलाग्दो रुग्ण शहरको नाम । दिक्दारीका पहाडहरुले घेरेर यसलाई उपत्यका बनाएको छ । र दिक्दारीको पानी बग्ने वाग्मती नीलेर यहाँ मान्छेहरु दिक्दारी बाँच्दछन्, दिक्दारी काल पर्खेर हरक्षण । सिंहदरबारदेखि सुकुम्वासी वस्तीहरुसम्म मान्छेहरु उही अनुभव र उस्तै अनुहार लिएर आकाश ताकिरहन्छन्, यो आकाशमा के उडेको भनेर । काठमाण्डुको आकाशमा अरु के हुन सक्छ र ? सिवाय धूलोधुवाँले बनाएका वादल र त्यो भन्दा पनि पीरो तुवाँलो र बेला बेला त्यो तुवाँलो छेडेर वादल छुन खोज्ने केहि थोत्रा उडन्ते जहाजहरु । तर मान्छेहरु हरेक दिन यसैगरि आकाश ताकिरहन्छन् । कुनै फल खस्छ भन्ने आशा पनि होइन, कुनै प्रलयको प्रतिक्षामा होइन, वा कुनै दैवी अवतारको अवतरण हुन्छ भनेर होइन । यो खाली दिक्दारी मात्र हो । फगत समय कटाउने मेलो । सिँहदरबारबाट आकाश ताक्नेहरु लेख्न नजानेर दिक्क हुन्छन् र आकाश ताक्नुबाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प एके नै हुन्छ र । सुकुम्वासी वस्तीमा मान्छेहरुलाई दिन कसरी कटाउँ भन्ने पिरलो छ । र आकाश ताकेर दिन कटाउने मेसो गर्छन् ।
3 responses to “गन्थन – २”	Sheli Thapa says:	December 9, 2009 at 9:24 PM	nice writing n thinking byanice man
Reply	RJANIT says:	December 1, 2009 at 12:53 AM	Yo lekh padhda kathmandu ka sampurna chitra haru mathingal ma ghumirahekaa thiye…baastab mai kathmandu ko yathartha chitran gareko cha yo lekh le….ROOPESS…keep up the gud work..
Reply	राजे बुढाथोकी ‘नताम्स’ says:	November 13, 2009 at 5:32 AM	रुपेश जी, ब्लग निकै रोचक लाग्यो । छिमेकबाट चियाउँदै तपाईको ब्लगमा डुबुल्की मार्न एक्कासी आइपुगे । छोडेर जानै मन लागेन मलाई । अझ लेख्दै जानुहोला । सफलताको शुभकामना छ तपाईलाई ।